(src)="2.1"> ကမ္ဘာမြေရဲ့ ရက်တစ်ရက် စီမံကိန်းစရန် တစ်ရက်သာ လိုတော့သည် ၊
(src)="2.2"> ထိုနေ့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ လူများသည် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြမည်ဖြစ်ပြီး ၊
(src)="3.1"> ယင်းအတွေ့အကြုံ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ပါဝင်ရန် ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ လူအများစုက မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြသည် ။
(src)="3.2"> ထို့အပြင် မိဘလောင်းလျာများ ၊
(trg)="2.1"> Люди со всего мира зарегистрировались для участия в этом эксперименте , и многие создали свои или присоединились к уже существующим 495 группам и сообществам по разным темам : от родителей до свадеб , учителей и групп по отдельным странам или местоположению .
(src)="3.11"> ထို့ကြောင့် စီစဉ်သူများက အတွေ့အကြုံ ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဤနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်သူတစ်ယောက်ယောက်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရန် သို့မဟုတ် ထိုသူများကို ဖိတ်ခေါ်ပေးရန် နှိုးဆော်ထားသည် ။
(src)="4.1"> ထိုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန် ယခုအထိ မှတ်ပုံတင်နိုင်သေးသည် ၊
(trg)="2.2"> Хотя зарегестрировано уже более 10 000 участников , некоторые страны не очень сильно представлены , и организаторы опубликовали призыв о присоединении или приглашении людей , которые живут в одной из этих стран , чтобы они также стали частью эксперимента .
(src)="4.2"> ထို့ပြင် မိုးရှင်းဂရပ်ဖာ ဘလော့ဂ်မှ မတ်လမ်းဘာ့တ်က ရလဒ်များကို ကောင်းစွာ ပေါင်းပေးခဲ့သည် ။
(src)="5.1"> ဒီ စီမံကိန်းရဲ့ ရလဒ်က အကုန်လုံးမျှဝေနိုင်တဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ ။
(src)="5.3"> ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ အသိုင်းအဝန်းနဲ့ ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘုံဖြစ်ရပ်ရဲ့ အသိအအမှတ်ပြုတာကို လိုချင်တဲ့ နိုင်ငံသားတွေအတွက်လည်း အထူးရုပ်ရှင်ဆိုပြီး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။
(src)="6.1"> သို့သော်လည်း ဤဗီဒီယိုနောက်တစ်ပိုင်းအရ ထိုဗဟုသုတပွဲရတနာ သိုက်ကြီအား ကြည့်နိုင်ရန် သင်သည် ၁ဝရက် ၊
(src)="7.1"> ကမ္ဘာမြေရဲ့ ရက်တစ်ရက်ဆိုတာ ဘာလဲ
(src)="1.1"> တောင် ​ အာ ​ ရှ ၊
(src)="1.2"> ရေ ​ ကိစ္စ ​ နှင့် ပတ်သက် ​ ၍ ဘ ​ လော့ဂ် ​ ရေး ​ သူ ​ များ ဆွေးနွေး ​ ချက်
(src)="2.1"> ဘလော့ဂ်လှုပ်ရှားမှုနေ့ သည် အောက်တိုဘာ ​ လ ၁ ​ ၅ ​ ရက် ​ ၌ အကြောင်းအရာ ​ တစ် ​ ခု ​ တည်း ​ နှင့် ပတ်သက် ​ သည် ​ ကို တစ် ​ နေ့ ​ တည်း ​ တွင် ရေးသား ​ လွှင့် ​ တင် ​ ကြ ​ သော ကမ္ဘာ ​ ဘ ​ လော့ဂ် ​ ရေး ​ သူ ​ များ ​ စုစည်း ​ ပြီး နှစ်စဉ် ​ ကျင်းပ ​ သော အစီ ​ အစဉ် ​ တစ် ​ ခု ​ ဖြစ် ​ သည် ။
(src)="2.2"> ယခု ​ နှစ် လှုပ်ရှား ​ ရန် အကြောင်းအရာ ​ မှာ “ ရေ ” ဖြစ် ​ သည် ။
(src)="2.3"> တောင် ​ အာ ​ ရှ ​ မှ ဘ ​ လော့ဂ် ​ ရေး ​ သူ များ ​ စွာ ​ သည် ​ လည်း ဤ ​ အစီ ​ စဉ် ​ တွင် ပါဝင် ​ ခဲ့ ​ ကြ ​ သည် ။
(src)="3.2"> မာ ​ မယ် ​ လ ​ ပူ ​ ရမ် ​ တွင် ရေ ​ ဖြည့် ​ ရန် အိုး ​ များ တန်း ​ စီ ​ ထား ​ သည် ​ ကို တွေ့ ​ ရ ​ စဉ် ။
(src)="3.3"> ဖ ​ လစ် ​ ကာ ​ အသုံးပြု ​ သူ mckaysavage ၏ ဓာတ် ​ ပုံ ။
(trg)="1.4"> Многие блогеры с Южной Азии также приняли участие в данном событии .
(src)="5.3"> မြောက် ​ အိန္ဒိယ ​ က ရေ ​ ကို မွေး ​ ထုတ်ပေး ​ သည် ။
(src)="5.4"> တောင် ​ အိန္ဒိယ ​ က စီး ​ ဆင်း ​ လာ ​ သော မြစ် ​ များ ​ အတွက် တိုက်ခိုက် ​ သည် ။
(src)="5.6"> ထို့ ​ အပြင် အရှေ့ ​ ပိုင်း အိန္ဒိယ ​ က ​ မူ မည်သို့ ​ မျှ အကူအညီ ​ မ ​ ပေး ​ နိုင် ​ သော အမြင့် ​ ဆုံး မိုး ​ ရေ ​ ချိန် ​ ကို ပိုင်ဆိုင် ​ နေ ​ ပြန် ​ သည် ။
(src)="6.3"> လက်သင့် ​ မ ​ ခံ ​ ခြင်း ၊
(src)="6.4"> လာဘ် ​ စား ​ ခြင်း ၊
(src)="6.5"> သယ်ယူ ​ ရ ​ ခက် ​ ခြင်း ၊
(src)="6.6"> သုံးစွဲ ​ ခြင်း ၊
(src)="6.7"> သေ ​ ဆုံး ​ မှု ​ နှင့် ရောဂါ ​ များ ၊
(src)="6.8"> ညစ်ညမ်း ​ ခြင်း ၊
(src)="6.9"> ရေ ​ ကို ​ မှီခို ​ နေ ​ သော တာဝန် ​ မ ​ ကျေ ​ သော စက် ​ မှု ​ လုပ် ​ ငန်း ​ များ နှင့် အခြား ​ အကြောင်း ​ ချက် ​ များ ​ စွာ ပါဝင် ​ နေ ​ သည် ။
(src)="7.2"> ထို ​ အချိန် ​ က အဆုံး ​ မ ​ ရှိ ​ နိုင် ​ သော ရေချိုး ​ ခန်း ​ မှ ရေပန်း ​ များ ၊
(src)="7.3"> ရေနွေး ​ ရေချိုး ​ ကန် ​ များ ၊
(src)="7.4"> မိုး ​ ရေ ​ အောက် ​ မှ ပျော်ပွဲ ​ ရွှင် ​ ပွဲ ​ များ ၊
(src)="9.3"> အိန္ဒိယတွင် ဆူလဘ် လှုပ်ရှား ​ မှု သည် လူ ​ မှု ​ လုပ် ​ ငန်း တော် ​ လှန် ​ ရေး ​ ကို ယူဆောင် ​ လာ ​ ပေး ​ သည် ။
(src)="9.4"> ဒေါက် ​ တာ ဘင် ​ ဒတ်ရှ် ​ ဝါ ပ ​ သတ်က် ​ က စတင် ​ ခဲ့ ​ ပြီး ​ နောက် ​ တွင် ဆူ ​ လဘ် ​ ရှိ အိမ်သာ ​ များ ​ သည် ဈေးနှုန်း ​ သက်သာ ​ ပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ​ ထိန်းသိမ်း ​ နိုင် ​ သော နည်း ​ လမ်း ​ ကို ပေး ​ စွမ်းနိုင် ​ ခဲ့ ​ ခြင်း ​ ပင် ဖြစ် ​ သည် ။
(trg)="5.1"> И в довершение , водные беды Индии включают в себя загрязнение , неадекватность , отказ , коррупция , проблемы подачи воды , доступ , смерти и болезни , загрязнение окружающей среды , безответственность зависящего от воды промышленного роста и многое другое .
(src)="11.1"> ရေ အကျပ်အတည်း ​ သည် နီ ​ ပေါ ​ ၏ ပတ်ဝန်းကျင် ​ ညစ်ညမ်း ​ မှု ​ နှင့် တိုက်ရိုက် ​ သက်ဆိုင် ​ နေ ​ ပါ ​ သည် ။
(trg)="6.4"> Не существовало понятия водоснабжение 24 часа в сутки ,7дней в неделю , и в каждым дворе нужно было прорывать подход к воде .
(src)="13.2"> ပါ ​ ကစ္စ ​ တန် ၊
(src)="15.2"> ခူရှ် ​ က ​ ဘ နှင့် ဆိုင် ​ လ ​ ဘ ​ တို့ ​ ၏ စိုက်ပျိုး ​ ရေး ​ နည်း ​ လမ်း ​ နှစ် ​ ခု ​ မှာ လမ်းလွှဲ ​ ခံ ​ လာ ​ ရ ​ သည် ၊
(src)="15.4"> အဘယ် ​ ကြောင့် ​ ဆိုသော် ရေ ​ လွှမ်းမိုး ​ မှု ​ သည် လား ​ ရာ ​ ပြောင်း ​ သွား ​ ခဲ့ ​ ပြီး ယခု ​ အခါ ပညာ ​ ရှင် ​ များ ​ ပင် ​ လျှင် မည် ​ သည့် ​ ဒေသ ​ သည် ရေ ​ လွှမ်းမိုး ​ ခံ ​ ရ ​ မည် ​ ကို ခန့် ​ မှန်း ​ နိုင် ​ ခြင်း မ ​ ရှိ ​ တော့ ​ ဘဲ ဘာ ​ လု ​ ချိ ​ စ ​ တန် ​ တောင် ​ ကြား ​ ရှိ ​ လူ ​ များ ​ အတွက် ကောင်း ​ ချီး ​ ဖြစ် ​ ခဲ့ ​ ဖူး ​ သော တောင်တန်း ​ များ ​ သည် ယခု ​ အခါ သဘာ၀ ​ ဘေး ​ အန္တရာယ် ​ ၏ အန္တရာယ် ​ ဖြစ် ​ နေ ​ တော့ ​ သည် ။
(src)="18.1"> မိုးရွာ ပြီ ​ ဆို ​ လျှင် “ တို ​ ဘ ” ဟုခေါ် ​ သော လူ ​ နှင့် ​ တိရစ္ဆာန် ​ များ ရေ ​ အတူတူ ​ သောက် ​ ကြ ​ သည့် ပန်းကန်လုံး ​ ပုံ ​ သဏ္ဌာန် ရေတွင်း ​ ငယ် ​ များ ​ ထဲ ​ သို့ စီး ​ ဝင် ​ သည် ။
(trg)="8.9"> Когда идет дождь , воды собирается в прудах в форме низкого кубка “ тобас ” , откуда пьют и люди , и животные .
(src)="18.3"> တူး ​ ၍ ​ ရ ​ သည် ​ ဆို ​ လျှင် ​ ပင် ရေ ​ သည် အလွန် ​ ငန် ​ သော ဆား ​ ငန် ​ ရေ ​ သာ ဖြစ် ​ ၍ မ ​ သောက် ​ သုံး ​ နိုင် ​ ပေ ။
(src)="1.1"> မော် ​ ရို ​ ကို ၊
(src)="1.3"> ဇူလိုင်လတွင် မော်ရိုကိုကျောင်းသားတစ်စုသည် " ပညာရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲမည့် မော်ရိုကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂ " ( ပြင်သစ်စကားဖြင့်အတိုကောက် UECSE ) ဟုခေါ်သည့် ဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) စာမျက်နှာကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် ။
(src)="1.4"> ထိုအဖွဲ့သည် " ပညာရေးစနစ်ကို တိုးတက်စေရန် ခိုင်မာသော နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မည့် " မော်ရိုကိုလူငယ်များကို စုစည်းလျက်ရှိသည် ။
(src)="2.1"> တစ်လထက် မပိုသော အချိန်အတွင်းတွင် ၊
(src)="2.2"> ယင်းဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) စာမျက်နှာသည် အဖွဲ့ဝင်ပေါင်း ၁၀ ⁠ ၀၀၀ကျော်ကို စုစည်းနိုင်ခဲ့ပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် အားပေးထောက်ခံမှု အများအပြားကို ရရှိခဲ့သည် ။
(src)="3.1"> ထိုလှုပ်ရှားမှုအဟုန်ကို အစိုးရတက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းလခမူကို အစိုးရက ပိုမိုတင်းကျပ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟူသော သတင်းက အားဖြည့်ပေးလိုက်ပုံရသည် ။
(src)="4.2"> ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် တိုက်တွန်းလိုက်သည် ။
(src)="6.1"> ဆန္ဒပြခြင်းမစမီ ယူကျူ့ပေါ်သို့ ယင်းအဖွဲ့မှ တင်ခဲ့သော ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် ကျောင်းသားများက ပညာရေးစနစ်အတွက် သိသာသောပြောင်းလဲမှုများကို တောင်းဆိုထားကြသည် ။
(trg)="6.1"> В видео , которое студенты добавили в YouTube перед протестом , студенты призывают к радикальным переменам в системе образования .
(src)="6.2"> " ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးက ပြောင်းဖို့လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ကင်မရာကိုကြည့် ၍ ပြောသည် ။
(src)="6.3"> " ဒီစနစ်တစ်ခုလုံးကို အားလုံးပိုင်းချလိုက်ပြီး ဟိုးအစကနေ ပြန်တည်ဆောင်ဖို့လိုတယ် " ဟု အခြားတစ်ယောက်က ဆိုသည် ။
(src)="6.5"> အထူးသဖြင့် ကောလိပ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲအတွက် အလွန်မြင့်မားသော တံခါးခံနေမှု အစရှိသည်တို့ ပါဝင်နေသည်ကို ထောက်ပြရှုံ့ချခဲ့ကြသည် ။
(src)="7.1"> ဆန္ဒပြသောနေ့တွင် အင်တာနက်တွင် ဝေမျှထားသော မှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံများ ၊
(src)="9.1"> ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုအတွက် တောင်းဆိုနေသော မော်ရိုကိုကျောင်းသားများ ၊
(src)="9.3"> ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည် ။
(trg)="10.2"> Фотография Хассана Оуззани , использована с разрешения .
(src)="10.1"> ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုအတွက် တောင်းဆိုနေသော မော်ရိုကိုကျောင်းသားများ ၊
(trg)="11.1"> Марокканские студенты призывают к реформе системы образования .
(src)="10.3"> ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည် ။
(trg)="11.2"> Фотография Хассана Оуззани , использована с разрешения .
(src)="12.1"> ဆန္ဒပြမှုသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည် ။
(src)="13.1"> တမ်ဘလာတွင်လည်း UECSE ကရေးသားခဲ့သည်မှာ ၊
(src)="13.2"> လူငယ်ကျောင်းသားတွေက ပညာရေးစနစ်ကောင်းတစ်ခုကို တောင်းဆိုနေကြတာ ၊
(src)="13.3"> သူတို့တွေက မော်ရိုကိုကျောင်းသားတွေ ၊
(src)="13.4"> သူတို့အနာဂတ်ကို ပြောင်းလဲပြီး အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ် ၊
(src)="13.5"> ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့ လှိုင်းတစ်လုံးကတော့ တက်လာနေပြီ
(src)="1.1"> ဖိ ​ လစ် ​ ပိုင် ၊
(src)="1.2"> နိုင်ငံ ​ တကာ ​ ပျောက် ​ ဆုံး ​ သူ ​ များ ​ နေ့ ​ အတွက် ဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) မှ ​ ဓာတ် ​ ပုံ ​ များ ဖြုတ် ​ ချ
(src)="2.1"> ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) အသုံးပြုသူများသည် လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လ ( ၃ဝ ) ရက်နေ့က ဖိနှိပ်ခံ ပျောက်ဆုံးမှုမှ ဓားစာခံများအတွက် အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးအလို့ငှာ မိမိတို့ ဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) မှ ဓာတ်ပုံများကို ဖြုတ်ချခဲ့ကြသည် ။
(src)="4.2"> လှုပ်ရှားမှု ၏ ဦးတည်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် ။
(src)="5.1"> - မာကို့ ( စ် ) နှစ်များတွင် ရက်စက်ယုတ်မာသောစည်းကမ်းများချမှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့် အဓိကကျသောလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းတို့ကို အမှတ်ရစေရန်
(src)="8.1"> လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရှေ့ဆောင်ပြောကြားသူများ ၊
(src)="8.3"> များစွာသော လူထုအဖွဲ့အစည်းတို့သည် မနီလာမြို့နှင့် အခြားအဓိကမြို့များတွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည် ။
(src)="11.1"> ဂျေ ကူစတာ သည် ၄င်းဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) မှ သူငယ်ချင်းများအားတရားမျှတမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတို့အတွက် လှုပ်ရှားမှုကို အားပေးရန်အတွက် မိမိတို့ဓာတ်ပုံကို ဖြုတ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည် ။
(src)="12.1"> ချစ်ခင်ရပါသော သူငယ်ချင်းများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များခင်ဗျား ၊
(src)="12.2"> စစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှ ယနေ့အချိန်ထိ တရားမျှတမှုကို တစိုက်မတ် ⁠ မတ်ရှာဖွေနေကြသော ပျောက်ဆုံးသူများ ၏ မိတ်ဆွေများ ၊
(src)="12.3"> မိသားစုများနှင့် တညီတညွတ်တည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ဖို့ လာမည့် သြဂုတ် ၃၀ရက်နေ့တွင် မိမိတို့ဖေ့ ( စ် ) ဘွတ် ( ခ် ) မှ ဓာတ်ပုံကို ဖြုတ်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။
(trg)="12.1"> Дорогие друзья и коллеги , Пожалуйста уберите фотографии из своих профилей в четверг 30 августа в знак солидарности с друзьями и семьями пропавших без вести в дни военного положения до настоящего времени , которые все еще продолжают добиваться справедливости .
(src)="12.5"> သြဂုတ်လ ၃၀ရက်နေ့သည် နိုင်ငံတကာ ပျောက်ဆုံးသူများနေ့ဖြစ်သည် ။
(trg)="12.2"> Это также выразит нашу поддержку законопроекта об антинасильственных исчезновениям .
(src)="13.1"> ဂျေကူစတာ ၏ အက် ( ဖ် ) ဘီ ကိုယ်ရေးဓာတ်ပုံ
(src)="14.1"> မဂ်ဘူဟို ( စ် ) ၏ အက် ( ဖ် ) ဘီ ကိုယ်ရေးဓာတ်ပုံ
(src)="15.1"> ဂျူဒီ တာဂွေဝါလိုက ပျောက်ဆုံးနေသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများစာရင်းဖြင့် ၄င်း ၏ ကိုယ်ရေးဓာတ်ပုံကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည် ။
(src)="16.1"> လူဝီ အာ ( ခ် ) ( စ် ) ပိုဆာ ၏ ဓာတ်ပုံ
(src)="1.1"> ၂ ​ ၀ ​ ၁ ​ ၂ ပါ ​ ရာ ​ လံ ​ ပစ် ၊
(src)="3.1"> ၂၀၁၂ခုနှစ် ၊
(trg)="1.2"> Эта статья является частью нашей специальной рубрики Олимпиада 2012 в Лондоне .
(src)="5.1"> ဂျေအိုအယ် ( လ် ) ပရက် ( စ် ) မှ ချား ( လ် ) ( စ် ) အယ် ( လ် ) မယ်လီယာနီက ထိုကစားပွဲများအတွက် စံချိန်တင်လက်မှတ်ရောင်းရနှုန်းအကြောင်းကို ရေးသားခဲ့သည် ။
(trg)="3.1"> С 29 августа по9сентября 2012 года в Лондоне проходят XIV Летние Параолимпийские игры .
(src)="1.5"> ပီ ​ အာ ( ပ ​ က ​ တန် ရ ​ ကျက် ၊
(src)="1.8"> ဓာတ် ​ ပုံ - အယ် ​ ရှာ အဒ ​ လီ ​ နာ ​ ၏ ဘ ​ လော့ ( ဂ် )
(trg)="2.1"> В начале сентября 2012 года проявилось некоторое общественное неодобрение , касающееся якобы предложенной оппозицией смены малайзийского флага .
(src)="3.1"> ဆစ် ( ခ် ) ဖေ ​ လယ် ​ စီကတော့ ​ အထူး ​ သ ​ ဖြင့် လွတ်လပ် ​ ရေး ​ နေ့ ​ ကျင်းပ ​ နေ ​ စဉ် ​ တွင် ထို ​ ကဲ့သို့ သ ​ တင်း ​ မျိုး ​ ထွက် ​ လာ ​ ခြင်း ​ သည် ရှက် ​ စရာ ​ လုပ် ​ ရပ် ​ ဟု ထင်မြင် ​ ခဲ့ ​ သည် ။
(src)="4.1"> မာဒေးကား ( လွတ်လပ် ​ ရေး ​ နေ့ ) ဆို ​ တာ စည်း ​ လုံး ​ ညီညွတ် ​ ခြင်း ​ အတွက် ​ ပဲ ဖြစ် ​ သင့် ​ ပါ ​ တယ် ။
(src)="4.2"> ကျွန်တော် ​ တို့ တစ် ​ နိုင်ငံ ​ တည်း ​ သား ​ အနေ ​ နဲ့ အတူတကွ ရပ် ​ တည် ​ ပြီး ​ တော့ ​ ကျွန်တော် ​ တို့ နိုင်ငံ ​ အတွက် တိုက် ​ ပွဲဝင် ​ သင့် ​ တယ် ။
(trg)="2.3"> Они собираются сделать новый флаг флагом Малайзии , когда PR ( оппозиционная коалиция Pakatan Rakyat ) получит контроль над Малайзией .
(src)="4.3"> ဒါပေမဲ့ ဒီ ​ နှစ် ​ ရဲ့ ​ မာ ​ ဒေး ​ ကား အခမ်းအနား ​ မှာ ​ တော့ လွတ်လပ် ​ ရေး ​ ဆို ​ တဲ့ အာဘော် ​ ကို ​ တောင် သဘော ​ မ ​ တူ ​ နိုင် ​ ဘူး ။
(src)="4.4"> ကျွန်တော် ​ တို့ ​ နိုင်ငံ ​ ရဲ့ မွေး ​ နေ့ ​ ပွဲ ​ ကို ​ တောင် အတူ ​ ထိုင် ​ ပြီး မ ​ ကျင်းပ ​ နိုင် ​ ဘူး ။
(src)="4.5"> အခမ်းအနား ​ နှစ် ​ ခု ၊
(src)="5.2"> ကျွန်တော် ​ တို့ ​ နိုင် ​ ငံတော် ​ အလံ ​ ဟာ အမေ ​ ရိ ​ ကန် ​ အလံ ​ တို့ ​ လို ​ မျိုး ​ နဲ့ ဆင် ​ နေ ​ တယ် ။
(src)="5.3"> ဒါပေမဲ့ ဒါ ​ ဟာ အလွန် ​ အရေးကြီး ​ တဲ့ မာ ​ ဒေး ​ ကား ​ အခမ်းအနား ​ ည ​ မှာ ခင်ဗျား ​ တို့ ​ ကို ကျွန်တော် ​ တို့ ​ အလံ ​ အပေါ် ဂုဏ် ​ ယူ ​ စွာ ​ နဲ့ သရော် ​ ဖို့ အခွင့် ​ အရေး ​ ပေး ​ နေ ​ တာ မဟုတ် ​ ဘူး ။
(src)="5.5"> တိုင်း ​ ပြည် ​ အတွက် ရှက် ​ ဖို့ ​ ကောင်း ​ လိုက် ​ တာ ။
(src)="5.7"> ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ် ​ ရေး ​ နေ့ ​ အခမ်းအနား ​ မှာ ဘယ် ​ လိုက် ​ ဘေး ​ ရီး ​ ယား ​ ပြည် ​ သူ ​ တွေ ​ က သူ ​ တို့ ​ အလံ ​ ကို ​ မနှစ် ​ မြို့ ​ ကြောင်း ​ ပြတာ တွေ့ ​ ဖူး ​ လို့ ​ လဲ ?
(src)="5.8"> ကျွန်တော့် ​ အထင် တကယ် ​ လို့ ပီ ​ အာ ( ပ ​ က ​ တန် ရ ​ ကျက် ၊
(src)="5.9"> အတိုက် ​ အခံ ) ပါ ​ တီ ​ သာ နောက် ​ လာ ​ မယ့် ၁ ​ ၃ ​ ကြိမ် ​ မြောက် အထွေ ​ ထွေ ​ ရွေး ​ ကောက် ​ ပွဲ ​ မှာ အနိုင် ​ ရ ​ ရင် ဒါ ​ တွေ ​ ဟာ မလေးရှား ​ မှာ သေချာ ​ ပေါက် ​ ဖြစ်လာ ​ မယ့် အရာ ​ တွေ ​ ပဲ ။
(src)="5.10"> ပီ ​ အာ ​ ပါ ​ တီ ကြည့် ​ ရ ​ တာ အစိုးရ ( ဝန်ကြီး ​ အဖွဲ့ ) သာ ​ မက ​ ဘဲ မလေးရှား ​ ရဲ့ ကိုယ် ​ ပိုင် ​ လက္ခဏာ ​ ကို ​ ပါ ပြောင်းလဲ ​ ချင် ​ ပုံ ​ ရ ​ တယ် ။
(src)="5.11"> အလံ ​ အသစ် ၊
(src)="5.12"> နိုင် ​ ငံတော် ​ သီချင်း ​ အသစ် နှင့် နာမည် ​ အသစ် ​ တောင် ဖြစ် ​ ရင် ​ ဖြစ် ​ မ ​ လား ​ ပဲ ။
(trg)="5.1"> Да , наш национальный флаг немного похож на флаг США .
(src)="6.1"> Protesters brandishing the proposed new flag .
(src)="7.4"> ဒီ ​ တော့ သူ ​ တို့ ​ လည်း မလေးရှား ​ အလံ ​ ကို ပြောင်း ​ ချင် ​ နေ ​ ကြ ​ တယ် ။
(src)="8.1"> နိုင် ​ ငံတော် ​ သီချင်း ​ ရော ဘယ် ​ လို ​ လဲ ။
(trg)="5.4"> Такой позор для страны .
(src)="8.2"> သူ ​ တို့ ​ အလံ ​ ကို ပြောင်း ​ မယ် ​ ဆို နိုင် ​ ငံတော် ​ သီချင်း ​ ကို ​ ရော ဘာ ​ လို့ ​ မ ​ ပြောင်း ​ တာ ​ လဲ ။
(src)="8.3"> သီချင်းက ​ ဟောင်း ​ တဲ့ ​ အထဲ ပါ ​ နေ ​ ပြီ ​ လေ ။
(src)="8.4"> တချို့ ​ က ​ ဆို ပျင်း ​ စရာ ​ ကောင်း ​ တယ် ​ လို့ ​ တောင် ပြော ​ ရင် ပြော ​ ကြ ​ မှာ ။
(src)="8.5"> ပြော ​ လို့ ​ မ ​ ရ ​ ဘူး ၊
(trg)="5.6"> Думаю , именно так будут развиваться события в Малайзии , если PR ( оппозиционная коалиция Pakatan Rakyat ) победит на следующих , тринадцатых всеобщих выборах .
(src)="8.6"> သူ ​ တို့ ​ တွေ နိုင် ​ ငံတော် ​ သီချင်း အသစ် ​ ကို ​ ရေး ​ ထုတ်ပေး ​ ဖို့ namewee ကို ​ တောင် ခေါ် ​ ချင်ခေါ် ​ နိုင် ​ တယ် ။
(src)="9.1"> ပြီး ​ တော့ ဘာ ​ လို့ ​ အလံ ​ နဲ့ နိုင် ​ ငံတော် ​ သီချင်း ​ မှာ ​ တင် ရပ် ​ နေ ​ မှာ ​ လဲ ၊
(src)="9.2"> နိုင်ငံ ​ နာမည် ​ ကို ပြောင်း ​ လိုက် ​ ရင် ​ ရော ။
(src)="9.6"> တောင် ​ ပိုင်း ဟင် ​ ဒူ ​ စ ​ တန် ၊
(src)="9.7"> စင် ​ ကာ ​ ပူ ​ မြောက် ​ ပိုင်း ၊
(src)="9.8"> စင် ​ ကာ ​ ပူ ​ မြောက် ​ ဘက် ​ ဆိပ်ကမ်း ၊
(src)="9.10"> ဒါ ​ မှ ​ မဟုတ် ကြီး ​ မြတ် ​ သော ဒ ​ မန် ​ ဆာ ​ ရာ ၊
(src)="9.12"> com ဆို ​ ရင် ​ ရော ။
(src)="10.1"> ပ ​ က ​ တန် ​ ရာ ​ ကျက် ​ ပါ ​ တီ ​ သည် မလေးရှား ​ နိုင်ငံ ​ ၏ ​ အလံ ​ ကို အစားထိုး ​ ပြောင်းလဲ ​ မည် ​ ဆို ​ သော ကောလာဟလ ​ နှင့် ​ ပတ် ​ သတ် ​ ၍ ပြန်လည် ​ ဝေဖန် ​ တိုက်ခိုက် ​ ရန် ယမန်နေ့ ​ က ​ ဝန်ကြီး ​ ချုပ် ဒါ ​ တွတ် ​ ဆ ​ ရီ နာ ​ ဂျစ် ( ဘ် ) ရာ ​ ဇတ် ( ခ် ) ကိုယ်တိုင် ညီညွတ် ​ သော ​ မ ​ လေး ​ အမျိုးသား ​ အဖွဲ့ ​ အစည်း ​ မှ အထက် ​ တန်း ​ ဝန်ကြီး ​ သုံး ​ ဦး ​ ကို ဦးဆောင် ​ လိုက် ​ သည်မှာ ညီညွတ် ​ သော ​ မ ​ လေး ​ အမျိုးသား ​ အဖွဲ့ ​ အစည်း ​ နှင့် ပတ်သက် ​ ပြီး ၄င်း ​ တို့ ​ ၏ ကြံမိ ​ ကြံ ​ ရာ ​ တုန့် ​ ပြန် ​ မှု ​ များ ​ သည် အမှန် ​ တရား ​ ကို ​ လေးစား ​ ခြင်း ​ ထက် ၄င်း ​ တို့ ​ ၏ ( ၁ ​ ၃ ) ကြိမ် ​ မြောက် ​ ရွေး ​ ကောက် ​ ပွဲ ​ ဖြစ်မြောက် ​ ရေး ​ ကို အရာ ​ ရာ ​ အားလုံး ​ ထက် ​ ပို ​ ပြီး အလေး ​ ထား ​ နေ ​ ကြောင်း ထင် ​ ဟပ် ​ စေ ​ သည် ။
(src)="11.1"> နိုင် ​ ငံတော် ​ အလံ ​ ပြောင်းလဲ ​ ခြင်း ​ သည် ပ ​ က ​ တန် ရာ ​ ကျက် ပါ ​ တီ ​ ၏ လုပ် ​ ငန်း ​ စဉ် ​ လုံး ​ ဝ ​ မဟုတ် ​ ပေ ၊
(trg)="8.1"> Изменение государственного флага никогда не появлялось на повестке дня Pakatan Rakyat , никогда не обсуждалось и не поднималось на заседаниях Rakyat Pakatan .
(src)="11.2"> ထို့ ​ အပြင် ထို ​ ကိစ္စ ​ ကို ​ ပါ ​ တီ ​ ၏ အစည်းအဝေး ​ ပွဲ ​ တွင် တင်ပြ ​ ဆွေးနွေး ​ ဖူး ​ ခြင်း ​ မ ​ ရှိ ​ ပေ ။
(src)="11.3"> သို့သော် UMNO / BN မှ ​ ညစ်ပတ် ​ လှ ​ သော ​ လှည့် ​ စား ​ မှု ​ ဌာန ​ က ပီ ​ အာ ( ပါ ​ က ​ တန် ရာ ​ ကျက် ​ ပါ ​ တီ ) က ​ နိုင် ​ ငံတော် ​ အလံ ​ ကို ​ ပြောင်းလဲ ​ လို ​ သည် ၊
(src)="11.4"> သို့မဟုတ် ၊
(src)="11.5"> ဖွဲ့ ​ စည်း ​ ပုံ ​ အခြေ ​ ခံ ​ ဥပဒေ ​ နှင့် ​ ညီ ​ သော ​ စနစ် ​ ကို ဖျက် ​ သိမ်း ​ လို ​ သည် ​ ဆို ​ သော သက်သေ ​ မ ​ ရှိ ​ သည့် စွပ်စွဲ ​ ချက် ​ နှင့် ဤ ​ တိုက်ခိုက် ​ မှု ​ များ ​ ကို အတိ ​ အလင်း ​ လုပ်ကြံ ​ ခဲ့ ​ ပါ ​ သည် ။
(src)="12.1"> ၂ ​ ၀ ⁠ ၀ ​ ၉ ခု ​ နှစ် ၊
(src)="13.1"> ဝန်ကြီး ​ ချုပ် ​ နှင့် ညီညွတ် ​ သော ​ မ ​ လေး ​ အမျိုးသား ​ အဖွဲ့ ​ အစည်း ​ မှ အထက် ​ တန်း ​ ဝန်ကြီး ​ များ ​ အနေ ​ ဖြင့် ပီ ​ အာ ​ ပါ ​ တီ ​ က ​ နိုင်ငံ ​ အလံ ​ ကို ​ ပြောင်းလဲ ​ ၍ မလေးရှား ​ ကို ​ သမ္မတ ​ စနစ် ​ ပြောင်းလဲ ​ ချင် ​ သည် ​ ဆို ​ သည့် ကောလာဟလ ​ က ​ ကို ဝန်ကြီး ​ များ ​ ထပ်ခါထပ်ခါ ​ ပြော ​ နေ ​ စဉ် ​ တွင် ပီ ​ အာ ​ ပါ ​ တီ ကို ​ ဆန့် ​ ကျင် ​ ၍ ညီညွတ် ​ သော ​ မ ​ လေး ​ အမျိုးသား ​ အဖွဲ့ ​ အစည်း ​ မှ အောက် ​ တန်း ​ ကျ ​ သော လှည့် ​ စား ​ မှု ​ ဌာန ​ ၏ မုသား ​ နှင့် မ ​ မှန်ကန် ​ သော လှုံ့ဆော် ​ မှု ​ ကို ဦးဆောင် ​ နေ ​ သည်မှာ အလွန် ​ တာဝန် ​ မဲ့ ​ ရာ ​ ကျ ​ သည် ။
(src)="1.3"> ဘလော့ဂ်ရေးသူတွေက ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ စွန့်စားနေရတဲ့အချိန်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အင်တာနက်ကို ဆင်ဆာဖြတ်ဖို့ ဥပဒေအသစ်တွေကို ဖန်တီးနေကြပါတယ် ။
(src)="2.2"> SOPA နဲ့ PIPA ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဆန့်ကျင်တာကအစ တုပပစ္စည်း ကုန်သွယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေး သဘောတူညီမှု ( ACTA ) ကို ရပ်တန့်ပစ်လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အင်အားစုအထိ ၊
(trg)="2.1"> В течение нескольких прошедших лет организации по всему миру объединялись как никогда ранее для борьбы за свободу в Сети.Работая в этом направлении , начиная от борьбы против SOPA и PIPA в США и до общих усилий по всему миру , которые заставили капитулировать Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией ( ACTA ) , мы достигли того , что дух времени сейчас - это свобода Интернета и открытость .
(src)="3.2"> Global Voices Advocacyကလည်း ကနဦး လက်မှတ်ထိုးသူတွေမှာ တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။